လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားရိုမေးနီးယ | Apg29
ဒါဟာတကယ့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုအဖြစ်သူတို့တစ်သားတစ်ကိုယ်တည်း (ကခန္ဓာကိုယ်) ဖြစ်လာနိုင်အောင်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ထူထောင်ခဲ့သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူနှင့်လူသည်အတူတကွပူးပေါင်းလို့မရပါဘူး။
1 ကမ္ဘာဦး 2:24
ဘယ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြား အမျိုးသမီးများကိုလက်ထပ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုလက်ထပ်ယောက်ျားသဘာဝအားဖြင့်တစ်မိသားစုအတူတကွကလေးများရှိသည်ဘယ်မှာ! အစစ်အမှန်များနှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖွစျဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ကျန်းမာမှန် မှ ရိုမေးနီးယားအတွက်တားမြစ်သည်လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြား !
(လိင်ကွဲသားမရဘဲလက်ထပ်ထိမ်းမြားရှိပါတယ်ကြောင်းငြင်းခုံအတူပါလာကြဘူးပါ - ဒါပေမယ့်အောက်ခြေလိုင်းလိင်ကွဲအိမ်ထောင်သည်မိသားစုများဖွဲ့စည်းရန်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ )
: အာဒံနဲ့ဧဝကိုခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး 24 အပြီးငါသိမြင်သို့မဟုတ်မတိုင်မီနားလည်သဘောပေါက်, ငါသည်ဤဆောင်းပါး၏ငါ၏အမှုကကိုဖတ်ရသောအခါယခုအချိန်တွင်သည်အထိဘယ်တော့မှပြီဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာကျမ်းပိုဒ်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက်
ထိုသူတို့က, လူနှင့်သူ၏ဇနီးနှစ်ဦးစလုံးအဝတ်အချည်းစည်း ရှိ. , ဒါပေမဲ့သူတို့ကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိကြဘူး။
1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 2:25
ဒါဟာလူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအတူတူသူတို့အဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုအချင်းချင်းလက်ထပ်ထားသူအခါမှသာပါ! လက်မထပ်ရသေးအတူတကွအဝတ်အချည်းစည်းမဖြစ်သင့်! တဖန်သင်တို့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမဟုတ်အတူလက်ထပ်ရန်ထို့နောက်များမှာ! ဒါကြောင့်ထို့နောက်အပြစ်မရှိပါ!